अब के हुन्छ माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य ? | Ekhabar Nepal
अब के हुन्छ माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य ?
राजनीति असार ३० 2078 ekhabarnepal
काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शार्म ओलीलाई सत्तावाट पदच्युत त गर्यो तर राजनीतिक भविष्य भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संकटग्रस्त वनेको छ । बालुवाटारवाट फर्केपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै निवास वालकोटमा पुगेका कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्दै माधवकुमार नेपालका लागि एमालेमा रहने सवै ढोका बन्द भएको घोषणा गर्नुभएको छ ।
अरु नेताहरुले आत्मालोचना गरेर आए स्वागत गर्न सकिने भएपनि नेपाललाई आत्मालोचनाको समेत स्थान नभएको चेतावनी दिदै ओलीले भन्नुभयो, ‘माधव नेपालको हकमा गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्ने आत्मालोचना गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।’
‘हाम्रो साथीहरु बिकाउ माल बने, बिरोधीलाई अदालतबाट सत्ता बुझाए, ती बिकाउ मालहरुको भविष्यले निर्धारण गर्ला,’ ओलीले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले यसो भनिरहँदा कार्यकर्ताले माधवलाई एमालेमा ल्याउन ‘हुन्न–हुन्न’ भन्दै नारा घन्काएका थिए ।
यस अघि युवा संघ तथा अनेरास्ववियुका नेता कार्यकर्ताहरुले वालुवाटारवाट वाजागाजासहित वालकोट पुर्याएका थिए ।
ओलीले भनेजस्तै नेपाललाई आत्मालोचना गरेरे पनि पार्टीमा स्थान नदिने हो भने उनको भविष्य के होला ? यो प्रश्न यतिवेला राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ । शेरवहादुर देउवालाई सत्ता वुझाउन निर्णयक गोल हानेका नेपाललाई नेतृत्वले स्थान दिए पनि वहुसंख्यक कार्यकर्ताले सम्मान दिने सम्भावना देखिदैन । पछिल्लो दिन खासगरी १० वुँदे सहमति पश्चात् पनि नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन जे जस्तो भूमिका देखाउनु भयो त्यो कार्यकर्तालाई पचेन । जवकि त्यस अघि नेपाललाई साथ दिने भीम रावल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरुप्रति कार्यकर्ताको् खासै गुनासो देखिदैन ।
नेपाललाई प्रचण्ड देवउवावाहेक अरु कसैले पनि विश्वास गर्ने अवस्था नरहनु दुःखद पक्ष हो ।
यसैवीच राजनीतिक विष्लेषक पुरञ्जन आचार्यले माधव नेपालकोवारेमा टिप्पणी गर्दै उहाँले कैयनपटक इतिहास धुमिल पार्नुभएको छ ।
आचार्यले एक आलेख मार्फत् भन्नुभएको छ–विगतमा पनि राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिनमा तारानाथ रानाभाट चिफ जस्टिस भएको कमिटीमा बस्छु भन्नुभयो । माधव नेपालले त्यसमा बसेर घर जान नपाई छाड्नुभयो । राजा ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन’ ‘कु’ पछि प्रतिगमन सच्चियो भन्दै हिँड्नुभयो । माधव नेपालजीले आफ्नो त्यही इतिहासको निरन्तरता गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँ बदनाम हुनुभएको थियो ।
माधवजीसँग ३५ वर्षदेखि सङ्गत गरेका उहाँकै साथीहरूले बेला–बेलामा खराब टिप्पणी गर्नुहुन्छ ः उहाँ नेता हुन सक्नुहुन्न, एउटा बैङ्कको म्यानेजरजस्तो व्यवस्थापकसम्म हुन सक्नुहुन्छ । राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने क्षमता उहाँसँग छैन भनेर साथीहरूले गरेको त्यो टिप्पणी अहिले सही देखियो । संसद् पुनर्स्थापना भएकै दिन यो गठबन्धनमा छैन भन्ने नैतिक शक्ति उहाँमा कहाँबाट आयो ? त्योभन्दा अनैतिक कुरा म केही देख्दिनँ ।
यसरी हेर्दा देउवालाई विश्वासको मत दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा एक खालको दवाव परेको छ । जुन काम गर्दा उहाँको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ । विगतमा अडान नभएको नेता भनेर लागेको आरोप पखाल्नका लागि नेपालले यो पटक देउवालाई सत्तारोहण गराउन चट्टानी अडान देखाउनुभयो । यसले अडानमा रहने नेताको परिचय वनाउने विश्वास भएपनि यो आत्मघाती कदम ठहरिने उत्तिकै सम्भावना छ । एमालेका दोश्रो दर्जाका नेताहरुले सारै जोडवल गरेर ओलीलाई सहमत गराउन सके परिस्थतिमा फेरवदल पनि आउला । तर के यो संभव छ ?
त्यसैले माधव नेपालको राजनीतिक भविष्यमा एक खालको वादल लागेको छ । यो वादललाई पन्छाउने उपाय के हुन सक्ला ? नेपालको चिन्ता शायद अहिले यसमै हुनुपर्छ । विगतमा पनि खास खास कारणले नेतृत्व विघटन भएको देखिन्छ । कुनै वेलाका मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली जसरी अहिले राजनीतिवाट अस्ताउँदै जानु भएको छ के त्यसरीनै माधव नेपालको पनि अस्ताउने वेला आएको हो ?